Maalin gudaheed 1,400 kale oo Iowans ah ayaa laga helay cudurka coronavirus-ka cusub, oo ay ku jiraa | KWIT
By Halima Osman • Oct 12, 2020
Saddex qof oo kale ayaa ugu dhintey Degmada Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegaysa in dhimashada ay ku jiraan nin iyo naag da'doodu u dhaxeyso 61 ilaa 80, iyo nin da 'ah. Tirada dhimashada tan iyo markii uu bilaabmay safka faafa ayaa hada ah 81 Gobolka Woodbury.
By Halima Osman • Oct 9, 2020
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo sheegayaa laba dhimasho kale oo dheeraad ah Gobolka Woodbury wadar ahaan 78.
Waxaa jiray 14 dhimasho oo dheeri ah oo laga diiwaan galiyay gobolka Iowa ku dhowaad 1,200 oo kiisas cusub ahna. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay leedahay cusbooneysiinta maanta waxaa ku jira imtixaan hore iyo macluumaad dhimasho ah.